‘हाम्रो पक्षमा जनलहर आएको छ’ « Loktantrapost
‘हाम्रो पक्षमा जनलहर आएको छ’
११ असार २०७४, आईतवार १०:२२
विमल आचार्य व्यवसाय र राजनीतिलाई एकैसाथ अघि बढाएका मेचीनगर क्षेत्रमा शालीन र भद्र सामाजिक व्यक्तित्व हुन् । उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मेचीनगर नगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदमा उम्मेद्वार बनाएको छ । अन्य पार्टी समर्थकका माझ पनि मिलनसार र सहयोगीको रुपमा चिनिएका आचार्यसँग लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकका प्रधान सम्पादक मोहन काजी र ज्ञानेन्द्र निरौलाले लिएको ताजा अन्तरवार्ता प्रस्तुत छ–
एकदमै तीब्र छ । समय अभावका कारणले अब घरदैलो सम्भव भइरहेको छैन । भेटघाट र चोक चोकमा गएर कोणसभाहरु अघि बढाइरहेका छौँ । एक किसिमले हाम्रो पक्षमा जनलहर आएको देख्न सकिन्छ ।
भूगोल बढेको छ । चुनावी प्रचारमा गाउँ सहर घुम्दा के देख्नु भयो ?
फरक ठाउँ भएकाले समस्याहरु पनि फरक नै छन् । बाटोघाटो, पानी, बिजुली, सुकुम्बासी, कटान, स्कुल, रोजगार जस्ता विषयका समस्याहरु मिल्दोजुल्दो छन् । सहरतिर बजार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बाटोहरुमा आकाशे पुल, व्यवस्थित ढलनाला, पार्किङका आवश्यकताहरु छन् । शिक्षामा आधुनिकीकरण र प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता देखिएको छ । गाउँका किसानहरु केही सुविधा पाएनौँ भन्छन् । मल, बिऊ, सिञ्चाइका समस्याहरु छन् । मजदुरहरु हकहित केही भएन भन्छन् । न स्वास्थ्य विमा छ, न कुनै विरामीमा राहत हुने कार्यक्रम छ । बगानका श्रमिकहरुले निम्न तहको हाजिरा पाइरहेका छन् । म एउटा सामाजिक व्यक्ति र नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार भएका नाताले त्यसलाई गम्भीर रुपमा मनन गरेको छु । बीस बर्षदेखि जुन आशा बोकेर बसेका छन् नगरवासीले म सबै चाहना पूरा गर्ने छु ।
विकासका लोभलाग्दा कुरा सबैले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । विमल आचार्यलाई नै भोट दिनु पर्ने कारण के छ ?
एउटा सामान्य मानिसले पनि आफ्नो बुवा विरामी हुँदै गर्दा छेउको मेडिकल कलेजमा भर्ना गरेर आइसीयुमा उपचार गर्छु भन्ने सोचेको हुन्छ । आफ्नो छोरालाई मेचीनगरमै इन्जिनियर पढाउने कुन अभिभावको चाहना नहोला र ! २० वर्षसम्म यस्ता आशा धेरै गरे जनताले । तर कसैले केही गरेनन् । गर्न सकिने सम्भावनायुक्त धेरै कामहरु थिए । विगतका प्रतिनिधि जसले जनताको मत पाएका थिए, उनीहरुले आत्मैदेखि ती कामहरु गरौँ भनेको देखिएन । मठमन्दिर, मलामी घरदेखि लिएर, आदिवासीका छोराछोरीहरुलाई पढाउने, गरीवका चुहिने घरहरु टाल्ने कामसम्म मैले गर्दै आएको सबैलाई थाहै छ । गरीवहरु विरामी परेर अप्ठेरो हुँदा, कुनै पनि सामाजिक कार्यमा अभाव हुँदा मैले व्यक्तिगत रुपमा जहिल्यै नाइँ नभनिकन सहयोग पुर्याउँदै आएको छु । खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत यस क्षेत्रको हरेक परिवर्तन र विकासमा म प्रत्यक्ष रुपमा सामाजिक व्यक्तिको रुपमा जोडिएको छु । एउटा साझा मान्छेको रुपमा काम गर्दै आएको मलाई अवश्य पनि मेचीनगरवासी आमादिदी बहिनी र दाजुभाइहरुले मतदान गर्नु हुने छ । हिजो फुसको घर र माटोको घरमा बसेको मान्छे हुँ म । मेरो काम, स्वाभाव र सामाजिक जीवन बारेमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । यस्तो अवस्थामा मेरो आधारहरु यिनै हुन् । नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्वको जुन खाँचो छ, त्यो विमल आचार्यले पूरा गर्छ भन्ने आम नगरवासीहरुको विश्वास देखिएको छ । विगतमा अरु प्रतिष्पर्धीहरुले अवसर पाइसकेको र उनीहरुको मूल्याङ्कन जनताले गरिसकेको अवस्था छ । मैले सबल र सफल नेतृत्व दिनसक्ने दृढ विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
नगरपालिकामा स्थानीय सरकारकै रुपमा अधिकारहरु आएका छन् । चुनाव जितेमा नगरपालिकालाई हाँक्ने कस्तो भिजन छ ?
कुनै पनि काम विना योजना सफल हुनै सक्दैन । म जुन संस्थामा काम गर्दै गए, त्यहाँ सफल नै छु । त्यो कुरा व्यवसायको क्षेत्र, शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने काँकरभिट्टा क्याम्पस हेर्न सकिन्छ । मेचीनगरलाई कसरी नमुना र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा म एउटा विस्तृत कार्ययोजना बनाउने छु । त्यसका लागि म नै सबै जान्ने भन्ने हुँदैन । विज्ञहरुको टोलीलाई त्यो योजना बनाउन जिम्मेवारी दिने छु । बजेटको खोजी र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार हो । बजेटको स्रोत खोज्ने र उपयोग गर्ने मेरो प्राथमिकता हुने छ ।
मेरो कार्यकालमा प्रदेश र सङ्घको बजेटको अत्याधिक परिचालन र प्रयोग गर्ने छु । विदेशी दातृ निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्माणमा जुट्ने छु । आर्थिक अनुदान तथा सहयोगको परिचालन गरेर यस नगरको समृद्धि गर्ने सङ्कल्प लिएको छु । हरेक नागरिकलाई मेचीनगरबासी हुनुमा गौरवको अनुभूति दिलाउने मेरो लक्ष्य हो ।
तपाइँ चुनावमा विजयी बन्नु भयो भने कस्तो मेयर पाउने छ मेचीनगरबासीले ?
मैले नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचार शून्यमा झर्ने छ । विकास निर्माणको लहर आउने छ । मेचीनगरवासीले मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकले यस नगरलाई आफ्नो भन्न पाउँदा गर्व गर्नलायक बनाउने छु । मलाई जनताको सेवक बन्नु छ । म शासक कहिल्यै हुन सक्दिन । मेरो स्वभाव पनि त्यस्तो छैन । विगतमा जसलाई नगरवासीले जिताएका थिए, उनीहरुबाट केही काम नभएका कारण आज पछुताउनु परिरहेको छ । मलाई विकासका लागि प्रतिबद्ध साझा मान्छेको रुपमा नगरवासीले चिन्नु भएको छ । म त्यो छविलाई कहिल्यै बिग्रन दिने छैन ।
व्यवसायमा लागेको व्यक्ति, राजनीतिमा अचानक आएको भनेर विपक्षीहरु भन्छन् । राजनीतिमा तपाइँ कसरी सक्रिय हुनु भयो ?
राजनीति गर्नेले कुनै पनि व्यवसाय गर्नु हँुदैन भन्ने सोच विश्वमा नै फेल भइसक्यो । कुनै पनि नेता आर्थिक रुपले आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने सक्षम र इमान्दार हुनुपर्छ । त्यसैले मेरो व्यवसयलाई प्रतिष्ठा र इमान्दारितासँग जोड्नेछु । मलाई यसका लागि राजनीति गर्नु पर्दैन । एउटा मानिस सबैभन्दा पहिला परिवारको सदस्य हो र त्यसपछि उ समाजको सदस्य । समाजको सदस्यको नाताले म सामाजिक कार्यहरुमा रुचि लिने गर्दछु । गरिब तथा असहायको शिक्षा, उपचार र विभिन्न कठिनाइहरुमा सहयोग गरेको छु । त्यसैले, म सामाजिक व्यक्तिका रुपमा चिनिने गर्दछु । तर, म राजनीतिक व्यक्ति पनि हुँ । त्यही राजनीतिक व्यक्ति भएकाले अहिले राजनीतिक रुपमा यो निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएको छु । जहिले पनि राजनीतिलाई सामाजिक अभियानसँग गाँस्न सक्नु पर्दछ । सफल राजनीतिक सम्बन्ध, उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा र असल राजनीतिक चरित्र भएको व्यक्तिको खोजी अहिले हुन थालेको छ । म त्यही भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । करीव तीस बर्षदेखि म झापाको नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील छु भने कसरी नयाँ भए ?
तपाइँले धेरै विकास निर्माणका योजना दिने छु भन्नु भयो । आम मेचीनगरबासीसँग तपाईको चाहिँ केही अपेक्षा छ कि ?
नगरबासीको सम्मान र समृद्धिको अभियान मेरो प्राथमिकता हो । म जितेर नगरापालिकामा गइसकेपछि कसैलाई काखापाखा व्यवहार गर्ने छैन । विपक्षी दलका साथीहरु नगरपालिकामा पार्टीको झण्डा गाड्ने भाषण पनि गर्दा रहेछन् । तर नगरपालिका भनेको सबै पार्टी र पक्षका नगरवासीको सेवा गर्ने थलो हो । पार्टीको झण्डा पार्टी कार्यालयमा गाड्नु पर्छ, नगरपालिकामा होइन । यस अभियानमा मलाई मेरो पार्टी तथा पार्टीका उम्मेद्वारलाई साथ र सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण आदरणीय मतदातामा हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यहाँको बौद्धिक वर्ग, सामाजिक अगुवा, व्यवसायी तथा व्यापारी, किसान र मजदुर, पत्रकार एवम् तमाम नागरिक पङ्तिलाई विकासको अभियानमा सघाउन तपाइँको अमूल्य मतदानको अपेक्षा राखेको छु ।